Ukubhiyozela-ukusebenzisana nomzi-mveliso weRUKANG wezihlalo ezinamavili kunye nabahambi
Yibhiyozele ngokufudumeleyo intsebenziswano kwezonyango lwaseHongzhu naseRukang ukusayina izivumelwano kwizitulo ezihamba ngamavili. Izikhokelo ezivela kuwo omabini amaqela, uMnu Yang noMnu Lv baya kuyo kwaye bayathembisa ukuba baya kuzama konke okusemandleni abo ukuxhasa izivumelwano ngokuqinileyo. Ukusukela ngoku, i-Hongzhu yezonyango inokunikezela ngezitulo ezinamavili kunye nabahamba nge-hemiplegic ngomzi mveliso wexabiso kunye namaxabiso okhuphiswano kwimarike. Izitulo ezihamba ngamavili kakhulu zinokuhambisa njengoko,
Eyona nto ithathelwa ingqalelo xa ukhetha isitulo esinamavili kukubaluleka kwesitulo esinamavili. Iindawo eziphambili zokuthwala ubunzima kubasebenzisi bezitulo ezihamba ngamavili zazijikeleze iityhubhu ezine ezijikelezayo, zijikeleze i-femur, ukuphakama kweYang kunye negxalaba. Ubungakanani besitulo esinamavili, ngakumbi ububanzi besihlalo, ubunzulu nokuphakama komva kwecala, kunye nomgama phakathi kwendawo yokuhamba ngeenyawo kunye nendawo yendawo yokuhlala, konke oku kuchaphazela ukuhamba kwegazi kweenxalenye ezifanelekileyo zabakhweli, kwaye kubangela ukuqubuka kwesikhumba, kunye nezilonda zoxinzelelo. Ukongeza, ukhuseleko lwesigulana, amandla okusebenza, ubunzima besitulo esinamavili, indawo yokusebenzisa, inkangeleko kunye neminye imiba kufuneka iqwalaselwe.
(1) Ububanzi behlalo: linganisa umgama phakathi kwamacala amabini okanye amane okanye amabini xa uhlala phantsi. Yongeza i-5cm, kwaye kuya kubakho isithuba esiyi-2,5cm kumacala omabini emva kokuhlala phantsi. Isitulo sicekeceke, ngoko kunzima ukuphakama uhle isitulo esinamavili. Inxalenye ephezulu kunye nethayile yethayile icinezelwe. Ukuba isihlalo sibanzi kakhulu, akukho lula ukuhlala uhleli. Akululanga ukuqhuba isitulo esinamavili. Imilenze kulula ukudinwa. Kunzima nokungena nangaphandle kwesango. (2) ubude behlalo: linganisa umgama othe tyaba phakathi kwethabhulethi yangasemva kunye nesihlunu se-crus gastrocnemius xa uhleli phantsi, kwaye unciphise umphumo womlinganiselo ngu-6.5cm. Ukuba isihlalo sifutshane kakhulu, ubunzima bomzimba ngokuyintloko buza kuwahlela kwi-ischium, ekulula ukubangela uxinzelelo olugqithisileyo kwindawo yengingqi; ukuba isihlalo sikhulu kakhulu, siya kunyanzela isahlulo sokwahlula-hlula, sichaphazele ukuhamba kwegazi kwendawo, kunye nokukhuthaza ulusu ngokukuko kwindawo yendawo. Kwizigulana ezinamathambo amafutshane okanye i-knee limited knight contracture, kungcono ukusebenzisa isitulo esifutshane. (3) Ukuphakama kwesihlalo: ulinganise umgama ukusuka esithendeni (okanye isithende) ukuya kwindlwana xa uhlala phantsi, yongeza ii-4cm, ubeke inyawo lomgangatho ubuncinci buyi-5cm emhlabeni. Ukuba isihlalo siphakame kakhulu, isitulo esinamavili asinakungena etafileni; ukuba isihlalo siphantsi kakhulu, ubunzima bethambo lokuhlala likhulu kakhulu. (4) Ukuphakama kwengalo: xa uhleli, ingalo ephezulu ibambene nkqo, kwaye umphambili ubekwe engalweni. Linganisa ukuphakama ukusuka kumphezulu wesihlalo ukuya kumda osezantsi wengalo, kunye no-25cm. Ukuphakama okufanelekileyo kwengalo kunceda ukugcina ukuma okuchanekileyo komzimba kunye nokulinganisela, kwaye kwenza ukuba imilenze ephezulu ibekwe kwindawo ekhululekile. I-handrail iphezulu kakhulu, kwaye ingalo ephezulu inyanzeliswa ukuba iphakamise, edla ngokudinwa. Ukuba i-armrest iphantsi kakhulu, kuya kufuneka uthembele phambili ukugcina uzinzo. Akukho lula ukudinwa, kodwa kunokuchaphazela ukuphefumla.
Ukulinda iindaba ezivela kuwe kwaye siya kuzama konke okusemandleni ethu ukubonelela nayiphi na ingcaciso oyifunayo.
Kwakhona, ndiyathemba ukuba sonke sinako ukuphucula ngezi mveliso kwaye ndiyathemba ukuba unokufumana izabelo ngakumbi kwimarike yakho.
Ixesha lokuposa: Mar-20-2019